သူတို့လွန်ဆွဲပွဲမှာ ကျုပ်တို့နာတယ် ...။
ထင်ယောင်ထင်မှားဆိုတာ သူတို့မသိကြဘူး ...။
ကမ္ဘာကြီးက ပါးပါးလာတယ် ...။
ရှုလိုက်မိတဲ့လေတိုင်းမှာ ရနံ့တွေ ရှားလာတယ် ...။
မီးခိုးမြူတွေက ခန်းလုံးပြည့် ကောင်းချီးဖွင့်ကြတယ် ...။
မီးရောင်စုံတွေနဲ့ ဇာတ်ပျက်အောင် တိုက်ကြတယ် ...။
အနောက်ဘက်မှာ အရှေ့မျှော်သူတွေ ဒုနဲ့ဒေး
အိမ်မက်တွေ တောင်လိုပုံနေရဲ့ ...။
နှစ်သစ်မှာ ပွင့်လန်းပေးပါဦး ကမ္ဘာကြိး
ကိုယ် ထူ ကိုယ် ထ ပဲ ဆို ဆို
သူ ထူ ကိုယ် ထ ပဲ ဆို ဆို
ကမ္ဘာကြီး တည်တံ့နေအုန်းမှာပါ ...။
နှစ်သစ်အတွက် ရေးဖွဲ့ပါသည်။ ညီမလေး အေဒီ က ပါဝင်အားဖြည့်ပေးပါသည်။ နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသာမှု များဖြင့်သာ တွေ့ကြုံကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း ....
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 11:31 PM9comment[s]
နေ ၀င် ည နေ
လွတ်လပ်မှုနယ်ပယ်မှာ ကျွန်တော်က အကျူံးဝင်နေတယ် ...။
ညဉ့်ငှက်ရဲ့ ပရိသတ် တစ်ယောက်လို
ကြယ်တွေက ငိုလို့ပေါ့ ...။
အဲ့ဒီ မြို့ပြမှာ နေသားကျပါတယ်ဗျာ ...
သီချင်းတစ်ပုဒ် ဟဲ ရဲမှတော့
အလင်း အမှောင်ထဲ ခပ်ကဲကဲပါပဲ ...။
သီချင်းအဆုံးမှာ အက်ကွဲသံ သဲ့သဲ့
ရင်ဘတ်ထဲမှာ ခပ်ယဲ့ယဲ့ပါပဲ ...။
အနာဂတ် အတွက် ရင်ခုန်ရက်တွေ ပါပဲလေ ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 10:56 PM5comment[s]
သတိ (သို့) အသိ
ထူးတောင် ထူးဆန်းတယ်ကွယ် ...
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်က လမ်းပြကြယ် တခုပေါ့ ...
အခမ်းနားဆုံး စကားတွေနဲ့ ဖွဲ့ဆိုကြပါ
ကျေးငှက်တွေ တေးဆိုတတ်ဖို့ သင်ကြားနေကြတုန်းပါ ...
လမ်းပျောက်တဲ့ ကလေးကို ကူညီပါ
ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုနဲ့ ပျောက်ဆုံးပါ ...
အနံ့ နဲ့ မြင်ကြည့်ပါ
ခင်ဗျားရှေ့ မမြင်နိုင်တာ ဒုနဲ့ဒေး
ဦးနှောက်တွေ ကျဆုံးကြပြီ ...
သီအိုရီတစ်ခုကို ဖော်သူက ဖော်
ကျုပ်တို့ နဖူးပေါ် လက်တင် အိပ်ကြစို့ ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 1:20 AM7comment[s]
“သို့ ... သူ”
အလှမ်းကွာတာ မဆန်းပါဘူး ... သူ ...။
ပွဲဆူအောင်လည်း မလုပ်ချင်ဘူး ... သူ ...။
တခါတခါ မှောင်ရိပ်ခို ငိုရတာ
မသက်သာလှဘူး ... သူ ...။
ပစ်ရင်လည်း(ရင်)စူးမှာပါပဲ ... သူ
ကျွန်တော်ရင်တွေလည်း ပူတယ် ... သူ ...။
အသည်းမာတတ်သူတဲ့လား ... သူ
အလွမ်းကိုပဲ (ပိုင်) စိုးချင်သူမို့
စိတ်ကူးနဲ့ ရူးနေတုန်းပါ ... သူ ...။
လက်ဆစ်တွေကို ရည် (တွက်) ချိုးရင်း
ကျွန်တော် အလွမ်းတွေ ကြောင်းနေပါရစေတော့
ထာဝရ ရင်၌ပျိုးသော ... အို ... သူ ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 10:12 PM 13 comment[s]
အချိန်တွေက အဆုပ်လိုက် ၀ါးမြိုသွားကြတယ် ...။
ပေးလိုက်တဲ့ အရသာက ပိုခါးတယ် ...။
ချိုခြင်း ခါးခြင်း ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း
အားလုံးဟာ ပြီးဆုံးသွားခြင်းပဲ ...။
တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် ကွာခြားသွားတယ် ...။
ကျွန်တော်လည်း လေ (တေပေ) တုန်းပါပဲ ...။
"Happy Birthday To Me" ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 12:40 AM 16 comment[s]
အဲ့ဒီ ညနေတွေက လှပလွန်းတယ်
သံယောဇဉ် တစ်မျှင်နှစ်မျှင် ...
ငါ ကိုယ်တိုင်ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ
ငါ ကိုယ်တိုင်တွေးပေးခဲ့တဲ့ အနာဂတ်
မင်း အတွက် ထာဝစဉ်
လမင်းက ငါ့ကို မကြိုမှတော့
ငါ့ စိတ်တွေ လေနေပစေ
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 9:08 PM7comment[s]
ရင်ခုန်သံ သဲ့သဲ့က ရပ်မသွားဘူး ...
အသက်ရှုသံ တစက ထိရှတုန်း ...။
ကိုယ်ဟာ အတင်း “အပြစ်” ခံရတဲ့ လူ ...။
ပန်းကလေးတွေ ကိုယ်တို့ အကြောင်းပြောကြတုန်း
မြေနီလမ်းလေးမှာ ကျေးငှက်တွေ သီကြူးတုန်း
ထူးဆစ်မလာနိုင်တဲ့ “အရူး” အဖြစ်နဲ့ လူ ...။
အနောက်ပြန်ရောက်နေခဲ့ပြန်တယ် ... ကောင်မလေးရယ် ...။
အနောက် = အတိတ်)
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 11:39 PM 8 comment[s]
ကျွန်တော်တို့ကိုတောင် နှုတ်ဆတ်သွားကြပြီလေ ...
ကျွန်တော့် ဖိနပ်လေးကို စီး
နေ့တွေကိုလည်း ငြီးရအုန်းမယ် ...
ကျွန်တော့်တို့ ကြားမှာ မပေါ်သေးသရွေ့
ကျွန်တော့် ဖိနပ်လေးရယ် ...
ကျွန်တော့် မျှော်လင့်ချက်လေးရယ် ...
ကဗျာလေးတွေ ရေးကြမယ်လေ ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 11:29 PM9comment[s]
ဒဏ်ရာတွေ ထုဆစ်ပုံသွင်းဖို့ 
မှန်းမျှော်ဖို့ လည်း မတန်သတဲ့ လား
ငါ့တွင်းကိုပဲ ခပ်နက်နက်တူးချင်ရဲ .
တကူးတကလည်း ငိုပြမနေနဲ့ တော့ကွယ်
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 11:48 PM4comment[s]
မုတ်သုံတောင်ဝင်ခဲ့ ပြီ …
မလန်းပဲ ဆန်းနေတယ် ဂျူလိုင်။
နင့်ရဲ့ ခေတ်ဦးဒဿန တွေထဲမှာ
စံပယ်ခင်းလမ်းကို လှမ်းရင်းဖြေတယ် ...
စံပယ်တွေ စံပယ်နံ့ မွှေးတယ်
အမှန်နဲ့ အမှား ဆိုတာ
အကြွေစေ့ပေါ်က ခေါင်းနဲ့ ပန်းလို
တစ်လောကလုံးလှည့် စား ရရင်တောင်
ခေါင်းတစ်ဖက် ပန်းတစ်ဖက်နဲ့ ပဲ
ရေးသားသူ ... လွန်း
မေလ ၁၇ ရက်…အင်္ဂါ ၂၀၁၁
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 6:45 PM3comment[s]
အရိပ်တွေထက်တောင် ပါးလွှလာတယ် ...
အောက်ဆီဂျင်တောင် ညစ်ညမ်းပြီပေါ. ...
ကျွန်တော်လည်း ဖျားနာပါရစေ ...
တချို့က ပြောတယ် ...
သူတို့များ ကံကောင်းလိုက်ကြတာ ...
အရိပ်တွေကို တမ်းတရတာ များတော့
ကျွန်တော်တောင် အရိပ်မဲ့နေပြီလေ ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 9:35 AM3comment[s]
“ရင်ထဲက စာစုတို ကဗျာလေးများ (၂)”
တင့်ဆန်းလှတဲ့ အို ... စံပယ်
မေ့ ... တွက်မို့လေ စံပယ်ဖူးနှင့်
စိတ်ကူးရုံမျှ ရင်စူးလောက်အောင် ရူးရသည် ...။
မုန်းမေ့တော့မှာလား ... မေ ...
မောင့်ရင်မှာ ရူးရပြီမို့ ...
ပစ်ခွာကာအဝေး မပြေးပါနှင့် ...။
စောင့်မျှော်ငေးလင့် ပွင့်နေရုံသာ ...။
ခါတော်မှီ ပန်းတွေ ပွင့်လန်းစရာ မလိုပါဘူး
“သူ”ပေးတဲ့ နှုတ်ခမ်းရိုက်သံ သဲ့သဲ့နဲ့တောင်
ကျနော် ရင်မှာ ရနံ့သင်းပျံ့မှတော့
ချစ်သူရေ တစ်စက္ကန့်ရွေ့တိုင်း လွမ်းးးတယ် ...။
ကျနော်မှာတော့ အိပ်လို့ကောင်းတုန်း ...။
ဘာနဲ့မှ နှိုင်းမရဘူး ..
အမာရွတ်တွေ လှပချင်တုန်းပါပဲ ...
ငါကြွေမယ့်လမင်း မင်းအတွက် ဖြစ်ပါစေလေ ...
စုဆောင်းထားမိတဲ့ စာအတိုအတွာလေးတွေပါ ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 9:10 AM3comment[s]
တန်ခူးနှင့် ပနံ့သင့်လှပေတယ် ...။
အကြို နဲ့ အကျ
တချို့တွေ ခူးကြမည် ...။
အကြတ် နဲ့ အတတ်
နှစ်သစ်ကို ဖောက်ရမည် ...။
အလင်းရောင်က လှ လှတယ် ...
ကျွန်တော့်ရင်မှာ အေးလှတယ် ...။
အတာ နှင့် အင်္ကြန်
ပိတောက် နှင့် ငုဝါ
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 7:31 PM6comment[s]
အတင်းလုပြီး ခွင်းလာတယ် ...။
ကြွမ်းရင့်ကာ ကြွေကြရရှာတယ် ...။
မင်္ဂလာပါ နံနက်ခင်း ... လို့ ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 8:36 PM3comment[s]
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 12:20 AM6comment[s]
ကြွေ လွင့် နွမ်း လျှ
မျှော်လင့် တမ်းတ လွမ်းနာကျတယ် ...။
သခင့် စေရာ နင်းခဲ့ပြီးမှ ...
မညာပဲ ချစ်ပါရစေ သခင်
လေပြေရယ် ဆောင်ယူပါစေသား ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 8:59 PM2comment[s]
“ကြက်ခြေခတ် ၀င်းရိုးစွန်းနဲ့ နေတစ်ခေတ် လတစ်ခေတ် ကောင်းကင်”
မိုးက အနောက်တောင်လေ အပြိုင်းပြိုင်းနဲ့
မြက်ရိုင်း တစ်ပင်က ရှင်သန်နေတုန်းပါပဲ
ပေပေတေတေကောင် ဆိုတာ ဒုက္ခတွေထဲလည်း
နေနိုင်တဲ့သူပဲလေ . . . ။ ( ညလင်းအိမ် )
ဆောင်းပျိုငယ်က နွေကျဲကျဲ သုတ်ချသွားတာတောင်
ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေ အခုထိ ချိုနေတုန်းပါပဲ
ခါးနေမယ့်သူပဲလေ . . . ။ ( လင်းခေတ်ဒီနို )
ဖန်ဆင်းမှုကို အရောင်တင်ထားတဲ့ အရပ်သုံးစကား
ကြယ်ပျက်တစ်လုံးလိုပဲ . . .
ကြက်ခြေမခတ်နိုင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာတဲ့အခါ
ဆုတောင်းသံ သဲ့သဲ့လေးတော့ မင်းကြားနိုင်ပါစေကွာ . . . . ။ ( ညလင်းအိမ် )
သေငယ်ဇောနဲ့ မျှောနေတဲ့ ကြယ်တစ်လုံး
ကောင်းကင်တခြမ်းလိုပဲ . . .
နီညိုရောင် တောင်ပံတွေ ဖြန့်ခင်းလာတဲ့အခါ
နာကျင်ခြင်းမဲ့စွာ မင်းပျော်နိုင်ပါစေကွာ . . . . ။ ( လင်းခေတ်ဒီနို )
ငါ့ အာရုံတွေ အလင်းပျောက်တယ် ဒီဇင်ဘာ . . .
ဒီလို နံနက်ခင်းတိုင်းမှာ စကားသံတချို့
ခပ်တိတ်တိတ် ရှိုက်မိတဲ့ ဝေဒနာ တစ်ဝက်လောက်ကို
မာန တချို့ကို စိတ်ဖြာကြည့်လိုက်မိတော့
ဒီဇင်ဘာရယ် . . .
မင်းအတွက် ကျလို့ မလောက်သေးပါလားကွယ် . . . . ။ ( ညလင်းအိမ်)
ငါ့ရင်ဘတ်တွေ နာကျင်တယ် ဒီဇင်ဘာ . . .
သစ္စာတွေ အလွမ်းရောင် ပြောင်းခဲ့တာပဲ
ခပ်ရှိုက်ရှိုက် နမ်းမိတဲ့ အလွမ်းတစ်ဝက်လောက်ကို
မင်းအတွက် ဖြူစင်နေတုန်းပါပဲကွယ် . . . . ( လင်းခေတ်ဒီနို )
ဒီဇင်ဘာ . . .
ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးရယ် . . .
နွေဦးပေါက်လို့ မြူမှုန်တွေ ပျောက်သွားခဲ့ရင်
ရာဇ၀င်ထဲက ဒီဇင်ဘာက ပြောပြနေဦးမှာပါ . . . . ။ ( ညလင်းအိမ် )
ငါ့ ရင်ခုန်သံတွေ ယိုင်နဲ့တယ်
အိမ်မက်တွေ အညတရ ဆန်ခဲ့တယ်
ကဝေပျိုမငယ်လေးရယ် . . .
ဥပေက္ခာတွေ နင့်နင့်သည်းသည်း ပြိုကျခဲ့တယ်
ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ် . . .
နှင်းစက်လေးတွေ တစက်စက် ကြွေအကျမှာ
ဒီဇင်ဘာရယ်. . .
ငါဟာ ရင်ခွင် ကောင်းကင်မဲ့နေဦးမယ့်သူပါ . . . . ။ ( လင်းခေတ်ဒီနို )
@@@@@ ---- @@@@@
ကျွန်တော် ညလင်းအိမ် နဲ့ လင်းခေတ်ဒီနို (ဗညား) တို့ ကဗျာ အတူတူ မစပ်ဖြစ်ခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ ။ မနေ့တနေ့က ကျွန်တော်တို့ ညီအကို နှစ်ယောက် အလုပ်အားနေတဲ့ အချိန် ကဗျာရေးချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်လာလို့ နှစ်ယောက် အတူတူ ကဗျာရေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ နှစ်ယောက်စလုံးက အလွမ်းကဗျာသမားပီပီ အလွမ်းကဗျာကိုပဲ ရေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တည်းဖြတ်ကတော့ ဗညားပါ။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 8:09 AM3comment[s]
ငါးနှစ်ကောင် နက္ခတ်တို့ ပျော်မြူး
အားအင် ပြည့်စွာ ရုန်းကြွနေလိမ့်မည်။
ယနေ့၌ ကျရောက်သော မွေးနေ့မှစ၍
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 8:22 PM3comment[s]
“မရောက်လာတဲ့ ... ကြယ်”
ကြယ်ကြွေကောက်ဖို့ လက်တစ်ဖက် မရှိခဲ့ပါဘူး
ဒီလမ်းအဆုံးမှာမှ ပန်းတိုင်မရှိခဲ့တာ ...။
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောကြမလဲ ???
ရှာဖွေမှုတွေထဲ နွမ်းပါးစွာ ပျောက်ဆုံး
နိဂုံးက သပ်ရပ်လှပ သေဆုံးခဲ့တယ် ...။
အဲဒီ ရေအိုး ခမ်းသွားကြေးဆို
ကြယ်မင်းသမီးရယ် ငါ့ နှလုံးသားကို တံဆို့ ရိုက်ခဲ့ပါ ...။
ငါ့မှာ မင်းကိုချစ်တာက လွဲရင်
ကြယ်တွေကို တမက်တမော နမ်းရှိုက်တတ်တဲ့ စိတ်ပဲ ရှိတာပါ ...။
ကြယ်စု တွေ အရောင်တောက်လာတိုင်း
ငါ မူးနောက်နေချင်သေးတယ် ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 11:07 AM4comment[s]
ခေါင်းစဉ်ပေးရန် စကားလုံး မရှိပါ ..
လေညှင်းသံ သဲ့သဲ့တော့ ကြားတယ်
ကျွန်တော့်ကို ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူး
အဖူးအငုံပွင့်တွေထဲမှာမှ ရနံကို ရှာမိတယ် ...။
ရေးထားခဲ့သမျှ ဒိုင်ယာရီတွေက ပြောတယ်
ကံကြမ္မာက လက်မခံတဲ့ ကောင်တဲ့ ...။
တရားပါတယ် ... အားလုံး တရားကြပါတယ် ...
မှားနေတာက ကျွန်တော့်အတွေးနဲ့ ကျွန်တော် ...
ရူးလောက်အောင် မျည်ရည်ကျရုံလေးပါ ...
လောကကြီးကို ဒူးတုပ်ပြီး တောင်းပန်လိုက်တယ် ....
ကြယ်တွေက ငိုတယ် ...
ငှက်တွေက တေးဆိုတယ် ...
လူတွေက ကောင်းချီးပေးတယ် ..
ကောင်းကင်ကတော့ တရားချတယ် ...
လူမသိ သူမသိပါပဲ ပြီးဆုံးသွားတယ် ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 8:12 AM6comment[s]
အားလုံး မင်္ဂလာပါဗျာ။ ကျွန်တော် ခုရက်အတောအတွင်း ဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ သေချာတာတော့ ဘာမှ မလုပ်ချင်နေတာ ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် စာရေးခြင်း စာဖတ်ခြင်းအလုပ်ကို ခေတ္တခဏ နားထားမိတယ်။ အားလုံး တွေ့ပုချိပါ။ အခုတော့လည်း သူများတွေကို အားကျလို့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးပါမယ်။ မျက်စိဒုက္ခခံကြပါ။ ဒန်.. တန် .. တန် ..။
လမ်းမကြီးရဲ့ အဆုံးမှာ ထိုးထွက်နေပြီး ထီးထီးမားမား တည်ရှိနေတဲ့ အုတ်နီရောင်အမိုးနဲ့ အဆောက်အအုံ ၀င်းကြီးတစ်ခု။ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာတော့ စိမ်းစိုလန်းဆန်းနေတဲ့ မြက်ခင်းနုနုများ၊ သေသပ်လှပစွာ ဖန်တီးပြုပြင်ထားသော တောင်ကုန်းမြင့် ကလေးများ။ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဲဒီနေရာက ဒဏ္ဍာရီဆန်စွာ ဖြစ်တည်နေခဲ့တယ်။
ကားနောက်ခန်းမှာ နှုတ်ဆိတ်စွာ လိုက်ပါလာတဲ့ ကျွန်တော် မမြင်ဘူးတဲ့ ဒေသတစ်ခုမို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းစွာ ကြည့်နေမိဧ။် ။ ကားက အရှိန်အနည်းငယ် လျော့အသွား မြင်လိုက်ရတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု၊ ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ရေးထိုးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
“INSTITUTION OF MENTAL HEALTH”
ကျွန်တော် သေချာဖတ်နေမိတော့ ကားမောင်းနေတဲ့ ပရောဂျက်မန်နေဂျာက “မင်း ဒီနေကို သိလားတဲ့”။ ကျွန်တော်သွက်လက်စွာပဲ မသိဘူးလို့ အဖြေပေးလိုက်တယ်။ သူက ထပ်မေးတယ် .. “မင်း Mental ဆိုတာကို သိလား” ... ”သိပါတယ် .... စိတ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာကို ပြောတာပါ” ..“အင်းဟုတ်တယ် ဒီနေရာက တကယ်တော့ စိတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရောဂါရနေတဲ့ သူတွေကို ကုသပေးနေတဲ့ နေရာတစ်ခုပေါ့”။ ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ ဒါဆို ဒီနေရာက စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံပေါ့။ ကျွန်တော် ပိုစိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်။ ဒီနိုင်ငံက ဒီလိုဆေးရုံကြီးက ဘာလို့များ ဒီလောက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေရပါသလဲ အတွေးတွေ ပွားမိရင်း ပွားမိရင်းနဲ့ပေါ့ ။
ကြုံတုန်း ကြွားတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ကျွန်တော့် ရာထူးက ဘာလဲဆိုလားပဲ။ သူတို့ပြောတာတော့ "Field Service Engineer" တဲ့။ ကွန်တော်တို့က ဒီဆေးရုံမှာ "Panic Alarm System" ကို တပ်ဆင်ပေးနေရတယ်။ ဒီစနစ်က လူနာတစ်ယောက် (စိတ်ရောဂါခံစားနေရသူ) စိတ်ဖောက်လာတဲ့အခါ သက်ဆိုင်တဲ့ သူနာပြုတွေ၊ ဆရာဝန်တွေ၊ ရဲတွေစီကို အလိုအလျောက် အကြောင်းကြားပေးတဲ့ စနစ်တခုပါ။ ဒါမှသာ အဲဒီလူနာနဲ့ အနီးကပ်ရှိနေတဲ့ သူနာပြုရဲ့ အသက်အန္တရာယ် ကာကွယ်ပေးရာ ရောက်မှာပါ။
ကျွန်တော့်ကို ပရောဂျက် အင်ဂျင်နီယာနဲ့ မိတ်ဆတ်ပေးပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော်ဟာ မယောင်မလည်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အပြင်မှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသလောက် အတွင်းမှာ အော်ဟစ်နေကြတဲ့ ထောင်သားတွေရဲ့ အသံကြောင့် ကျွန်တော် ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းတောင် ထမိပါတယ်။ မန်နေဂျာက မှာကြားတဲ့ များပြားလှစွာသော စကားတွေကို ကျွန်တော်နားထောင်နေရင်း သက်မတစ်ချက်ကို တိတ်တိတ်လေး ခိုးချလိုက်မိဧ။်။
အ၀င်အထွက် တံခါးကို ခွင့်ပြုချက်မရပဲ မဖွင့်ရန်
ဖွင့်ဝင်တဲ့ တံခါးတိုင်းကို သေချာစွာ ပြန်ပိတ်ရန်
ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတိုင်းကို ၀င်မပါရန်
ဘာစမ်းသပ်မှုပဲ လုပ်လုပ် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံကို အကြောင်းကြားရန်
ဘယ်လူနာမှ ကိုယ့်ဘေးသို့ အကပ်မခံရန်
လူနာမူမမှန်ပါက တတ်နိုင်သလောက် ဝေးဝေးရှောင်ရန်
အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါက လူနာကို ထိခိုက်အောင် မလုပ်မိစေရန်
အမြဲတမ်းလွတ်မြောက်ဖို့ လမ်းကို ရှာပြီးမှ လူနာများနေရာ အခန်းသို့ ၀င်ရန်
ဘုရား ဘုရား ကျွန်တော်ဟာ အော်ပရေးရှင်း တိုက်ပွဲတစ်ခုကို ဆင်နွှဲရမယ့် ကွန်မန်ဒိုများဖြစ်သွားလေပြီလား။ စိတ်မောစွာနဲ့ပဲ ၀မ်းတထွာအတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်လုပ်ရတော့မယ်လေ။
နှင်းတွေမကြွေ မြူတွေမဆိုင်းပါပဲနဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အေးခဲခိုက်တုန်နေမိတယ်။ ဒီနေ့က IMH ကို တစ်ယောက်တည်း စတင်လာရတဲ့ နေပေါ့။ တက္ကစီပေါ်က အဆင်းမှာ ကျွန်တော်တာဝန်ကျရာ Block7သို့ ထွက်လာလိုက်တယ်။ သြော် ကျွန်တော်ပြောဖို့ မေ့နေခဲ့တယ်။ ဒီဆေးရုံမှာ block ပေါင်း ၉ ခုတိတိရှိပါတယ်။ တော်တော်ကို ကြီးတဲ့ ဆေးရုံကြီး တစ်ခုပါ။ Block7ဆိုတာကတော့ လုံးဝကို ပြန်လွှတ်လို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ္တဇထောင်သားတွေကို ဖမ်းချုပ်ရာ နေရာတစ်ခုပါ။
ကျွန်တော် လူခေါ်ဘဲလ်ကို နှိပ်လိုက်တယ်။ ပထမ မိန်းတံခါး တစ်ချပ်ပွင့်လာတယ်။ ကျွန်တော်လျင်မြန်စွာ ၀င်လိုက်ပြီး တံခါးကို အမြန်ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရန်သူနယ်မြေကို ချည်းနင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ ကွန်မန်ဒို တစ်ယောက်လို သဘောထားနေရတယ်။ ဒုတိယ တံခါးတစ်ချပ် ထပ်ပွင့်လာတယ်။ ဒါက ထောင်သားတွေကို ထမင်းကျွေးရာ နေရာတခု၊ အတွင်းဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ထောင်သားတွေကို တံခါးတစ်ချပ်သာ ခြားနေပြီး လှမ်းမြင်နေရတယ်။ ကျွန်တော်ရင်တွေ ခုန်နေတယ်။ ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကားပြောတုန်းကတောင် အဲဒီလောက် ရင်မခုန်မိဘူး ..း) ။ တတိယ တံခါးတစ်ချပ် ထပ်ပွင့်လာတယ်။ ဒါက ထောင်သားတွေ နားနေရာ နေရာတစ်ခု။ တီဗွီတစ်လုံးနဲ့ ခုံတန်းတစ်ချို့လွဲရင် ဘာမှကို မရှိ။ နောက်ဆုံး တံခါးတစ်ချပ် ထပ်ပွင့်လာတယ်။ ဒါနောက်ဆုံးတံခါး တစ်ချပ်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေက စစ်ဆေးအပြီးမှာ ကျွန်တော့်တို့ စနစ်တပ်ဆင်မယ် အဓိက Riser ကို သွားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အစက အဲမှာ လုပ်ဖို့ စိတ်တွေလေးနေပေမယ့် နောက်တော့ နေသားကျသွားလို့ပဲလား မသိပါဘူး။ ထောင်သားတွေကတောင် ကျွန်တော့်ကို မနက်ဆို လှမ်းနှုတ်ဆတ်ကြ .. ညနေအပြန်နှုတ်ဆတ်ကြနဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ ဘ၀က သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ တသက်လုံး ဒီလိုပဲ သွားရတော့မယ်လေ။ အပြင်လောကဆိုတာ သူတို့ဘ၀အတွက် အိပ်မက်တစ်ခုပဲ ဖြစ်နေတော့မှာပါ။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ကံက တကယ်ကို ဆိုးလှပါတယ်ဗျာ။
အဲဒီလိုနဲ့ပဲ Block တစ်ခုပြီး တစ်ခုနဲ့ ပရောဂျက်ပြီးတယ်အထိ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ တခြား Block တွေကတော့ ထောင်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရောဂါသက်သက်ကုတဲ့ နေရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ထောင်လိုပဲ ချူပ်နှောင်ထားရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ စိတ်ဖောက်ရင် ကြောက်ဖို့ကောင်းလို့ပါပဲ။
တချို့လူနာတွေကို နေ့ပိုင်း စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ NURSING HOME များလည်း ဒီဆေးရုံဝင်းထဲမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလေး မူကြိုပို့သလိုပေါ့။ မနက် မိသားစုဝင်တွေက အလုပ်မသွားခင် သူတို့ကို ဆေးရုံမှာ ထားခဲ့ပြီး ညနေမှ ပြန်လာခေါ်ကြတယ်လေ။ တချို့ဆို ဆေးရုံဝင်းထဲ ဒီအတိုင်း လျှောက်သွားနေတတ်ကြတယ်။ သူတို့ကတော့ စိတ်သိပ်မဖောက်တဲ့ သူတွေပေါ့။
ကျွန်တော် IMH မှာ လုပ်နေရင်း တစ်လလောက် အကြာမှာပေါ့ ... နေ့လည်စာ ထမင်းကို ဆေးရုံရဲ့ စားသောက်ဆိုင်တန်းမှာ စားနေရင်း လူတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်တာကို သတိထားလိုက်မိတယ်။ သူက ရှေ့သို့ လျှောက်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရှေ့ကို မရောက်ဘူး .. ခေါင်းတစ်ခြမ်းကလည်း စောင်းနေတယ် .. ငိုက်စိုက်ငိုက်စိုက်နဲ့။ အ၀တ်အစား ၀တ်ထားပုံက သေသေသပ်သပ်ပါ။ ကျွန်တော်သူ့ကို ကြည့်ပြီး “အော် .. ဒီလူက ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ရူးနေတာ ထင်ပါရဲ့” လို့ ညဉ်းမိတယ်။ အဲဒီအခါ ကျွန်တော်နဲ့ ထမင်းအတူတူ စားနေကြတဲ့ စီနီယာနှစ်ယောက်က ခွက်ထိုးခွက်လန် ရီပါလေရောဗျာ။ ကျွန်တော်က ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ပေါ့။ နောက်မှ သူတို့က “အဲဒါ လူနာမဟုတ်ဘူးကွ၊ ဒီဆေးရုံရဲ့ စီနီယာ ဒေါက်တာကွ” လို့ ပြောတော့မှ ကျွန်တော်ပါ ရီလိုက်ရတာ အူမတက်ပါပဲ။ ဆရာဝန်တွေလည်း ကြာလာတော့ လူနာတွေ ပုံစံပြောင်းလာတာပဲလား မသိဘူး။ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆို အဲလိုဖြစ်သွားမလားဆိုပြီး မဆီမဆိုင် တွေးပူမိပါသေးတယ်။း)
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ဟာ ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လူတိုင်းလိုလိုကို ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်။ လူနာတွေက အစပေါ့။ တချို့ Block တွေ ကျွန်တော်သွားပြီဆိုရင် တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် နှုတ်ဆက်ကြ တာဗျာ.. ဘေးက ကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော့်ကိုပါ လူနာထင်မလားပဲ။ တစ်နေ့ သတင်းတစ်ခု ကြားလိုက်ရတယ်။ လူနာတစ်ယောက် စိတ်ဖောက်ပြီး သူနာပြုတွေကို တိုက်ခိုက်၊ တံခါးတွေ ချိုးဖြတ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့။ တာဝန်ရှိသူတွေလည်း ခေါင်းပူရတာပေါ့။ သူ့ကို အမြန်ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ အပူတပြင်း လိုက်ကြလေရဲ့။ ဒါပေမယ့် ညမိုးချုပ်တဲ့ အထိ ရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ အဲ ... နောက်နေ့မနက်လည်းရောက်ရော အဲ့ဒီလူနာက ပြန်ရောက်လာတယ်။ အဲဒီတော့မှပဲ အားလုံးက စိတ်အေးကြရတော့တယ်။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် .. သူလည်း ထွက်ပြေးပြီးမှ နေစရာနေရာကမရှိ စားစရာကလည်း မရှိတော့ နောက်ဆုံး အိမ်ပဲ ပြန်တာပဲ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့တယ် ထင်တယ်။ အဲလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေလည်း တော်တော်များ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း နေ့စဉ်မြင်နေရ ကြားနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြည့်ပြီး အတွေးဝင်မိပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံကလူတွေက အလုပ်ကိုပဲ ဖိလုပ်ကြတယ်။ ငွေအတွက်ပဲ ရှင်သန်ကြရတယ်။ နေ့စဉ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရူးကြတယ်။ အိုမင်းလာတဲ့ အခါမှာလည်း သားသမီးရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို မခံကြရပါဘူး။ သားသမီးတွေက လူအိုရုံတွေကိုပဲ ပို့လိုက်ကြတာပါပဲ။ ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက် ဒီနိုင်ငံမှာ လူအိုရုံတွေ၊ သက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေ တော်တော်များကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာ သားသမီးကျင့်ဝတ်၊ မိဘကျင့်ဝတ် မလိုက်နာကြတာတွေတော်တော်များ ရှိနေကြပါလားဗျာ။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသာလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုင်းရှိုင်းပြိး ကျင့်ဝတ်သီလရှိသူတွေ စောင့်ထိန်းကျသူတွေကို တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီတစ်ခုအတွက်တော့ ကျွန်တော့်တို့ နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကြေနပ်နေမိပါတော့တယ်။
PS: ကျွန်တော် နောက်ဆုံးပြောချင်တာက စိတ်ဖိစီးမှုကို သိပ်မထားပါနဲ့။ ဘယ်အခက်အခဲနဲ့ပဲ ကြုံကြုံ အောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ ဆိုတဲ့ စိတ်မွေးပြီး ရှေ့ဆက်ကြပါ။ အရာရာကို လွယ်လွယ်သာတွေးပြီး တဆင့်ခြင်း လုပ်သွားပါ။ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အရသာကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ကြပါလို့ ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 5:37 PM7comment[s]
ရှစ်ခွင်တိုင်းဆိုင်း ရိုင်းနေတဲ့ မိုးရယ်
အိမ်ကို တမ်းတတယ် ...။
ခြေအစုံ လေနှင်ခဲ့တာ ကြာပြီ
ကျွန်တော်တော့ သောက်လေ ငတ်မပြေနိုင်ဘူး ...
ခဏလောက် သော့ခတ်ခဲ့ကြပါ ..
တချိန်ချိန်တော့ ဖောက်ယူစားသုံးရအုန်းမှာပေါ့ ...
ငါတို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင် ...
စံပယ်တွေလည်း အကြိုထောက်လင့်နေပြီ ...။
ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 2:35 PM 8 comment[s]
“ကြက်ခြေခတ် ၀င်းရိုးစွန်းနဲ့ နေတစ်ခေတ် လတစ်ခေတ် ကေ...